एउटै ब्यक्तिका २१ छोराछोरी, ९ छोराछोरी सीडीओसहित सरकारी जागिरे !
गुल्मी : अहिलेका जमानामा एउटै ब्यक्तिको २१ जना छोरा–छोरी ! त्यो पनि सबै सकुशल छन्, भन्दा पत्यार नलाग्ला । तर, वास्तविकता छर्लङ्गै छ कि गुल्मीका एक ब्यक्तिको २१ जना छोरा–छोरी सबै सकुशल छन् ।
उनले २०३३/३४ साल तिर निस्तेखोलाको एक्लेखेत फाँटमा आवत–जावत गर्ने आधुनिक झोलुङ्गे पुल आफ्नै खर्चमा बनाएर पारी हस्तीचौरतर्फ वारी पेगासम्मका सयौं जनतालाई सुविधा प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै पेगामा खानेपानी सुविधा आफ्नै खर्चमा उपलब्ध गराए ।
तल रातडाँडा तम्घास सडक खण्डको भन्ज्याङ्ग चौतारीमा बटुवालाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन पानी ट्यांकी निर्माण गरे । पेगा निमावि, मैदानको पृथ्वी मावि र रेसुङ्गा क्याम्पसको स्तरोन्नतीका लागि पनि उनले ठूलो आर्थिक सहयोग गरेका थिए ।
केही दिनअघि मात्र भारतको सिलाङ्गमा कान्छी श्रीमतीको परिवार भेट्न बाबु त्यसतर्फ हिँडेका परिवारजनले बताएका छन् ।